Zvizvarwa zvemumusha weRugare zvaita sungano yekubatsira vakwegura nekuunganidza zvokuti vapote vachinoongorwa zvirwere zvakaita seDiabetes neBlood Pressure.
Chirongwa ichi chiri kutungamirirwa nasachigaro weChurch and Community Mobilisation Process, CCMP, Dr Lamiel Byson Kachoti Phiri, icho chakaumbwa nechita cheAnglican Diocese Church muna Mbudzi gore rakapera.
Musha weRugare ndiyo imwe yezvimbo dzemuHarare dzakavakirwa vashandi veNational Railways of Zimbabwe asi vazhinji vevashandi ava vave pamudyandigare.
Dr Phiri vanoti nekuona kutambura kwainge kwoita vanhu muRugare, vakaona zvakakodzera kuti vabatane nevamwe kuti vabatsire. Vanotiwo mushure mekuparura chirongwa ichi, vakakumbirawo NRZ kuti ivabatsire nezvivakwa izvo vave kushandisa. Asi vanotiwo vachiri kuda rubatsiro rwakawanda
Vaendererawo mberi vachiti vakoti vavari kushanda navo vanodawo zvikwanisiro. Mumwe wevari kushanda mukubatsira vakwegura kana kuti nurse aid, Amai Amela Chunga Murisi vatenda kuti nyaya yemishonga iri kukanganisa basa ravo.
Ongororo yakaitwa nebazi rezvehutano yakaratidza kuti munhu mumwechete kubva muvanhu gumi ane chirwere cheshuga munyika.
Chirwere cheshuga chinokuvadza tsinga dzinofambisa ropa kumoyo, dzekumaziso uye dzekuitsvo. Chirwere chediabetes ndicho chinokonzera zvakare kudimburwa kwemakumbo evarwere makumi mapfumbabwe kubva muzana pasi rose.
Vanorwira kodzero dzehutano munyika vanoti chirwere ichi chinofanira kurapwa pachena sezvinoitwa cheHIV/AIDS nekuti chave kubata vanhu vakawandisa.
Imwe ongororo yakaitwa neUniversity of Zimbabwe inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana, vanorarama nechirwere cheHigh Blood Pressure.
Kunyangwe hazvo mutemo uchiti vane makore makumi matanhatu nemashanu vanorapwa pachena, izvi hazvisi kuitwa nekuda kwekusamira zvakanaka kwehupfumi.
Gurukota rezvemabasa VaPaul Mavima vanoti hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti iwedzere mari inotambirwa nevanhu vari pamudyandigere kubva kuNSSA kuti isvike pamadhora makumi matanhatu emari yekuAmerica.
Pari zvino vanhu vari kutambira madhora makumi maviri nemashanu uye VaMavima vati mari iyi ichawedzerwa kusvika pamadhora makumi mana munguva pfupi iri kutevera yozosvitswa pamadhora makumi matanhatu mukupera kwegore.